Diyaaradii Maraykanka ku faani jiray ee F-35 oo burburtay cilladna lagu arkay. | Warbaahinta Ayaamaha
Diyaaradii Maraykanka ku faani jiray ee F-35 oo burburtay cilladna lagu arkay.
Diyaaraddan waa tan ugu qaalisan uguna casrisan
MUQDISHO-AYAAMAHA-Baraha bulshada ayaa lasoo dhigay muuqaal hadal heyn badan dhaliyay oo u muuqda in laga soo duubay qaabka ay u burburtay diyaarad nooceedu yahay F-35 oo ay leeyihiin militariga UK, kaddib markii ay ka duushay markabka diyaaradaha xambaara ee HMS Queen Elizabeth.
Muuqaalka – oo lasoo dhigay Twitter-ka – waa mid noociisa ay adag tahay in la arko, waxaana uu u muuqdaa in laga soo duubay diyaaradda F-35 diyaaradda oo afka cirka u jeedisay xilli ay damacsaneyd inay ka duusho gegida markabka dushiisa ah.
Muuqaalka – oo u eg mid ay duubtay mid ka mid ah kaamirooyinka kormeerka ee markabka ku rakiban – ayaa laga arkayaa duuliye ka boodaya diyaaradda.
Bayaan soo baxay habeennimadii Isniinta ayay Wasaaradda Gaashaandhigga UK ku sheegtay in ay ka war qabto muuqaalka wareegaya baraha bulshada balse waxay sheegtay in hadda aysan ku degdegi karin jawaabta ku aaddan sababta keentay burburka.